Donald Trump oo beddelay mowqifkiisii hore ee Qatar, isaga oo ballan qaaday... - Caasimada Online
Home Dunida Donald Trump oo beddelay mowqifkiisii hore ee Qatar, isaga oo ballan qaaday…
Donald Trump oo beddelay mowqifkiisii hore ee Qatar, isaga oo ballan qaaday…
Washington DC (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa ballan-qaaday inuu sii wadi doono xiriirka wanaagsan ee Qatar kala dhaxeeya, isaga oo u muuqda inuu beddelay mowqifkiisa hore ee uu ku eedeeyey dalk Qatar.
Trump ayaa markii ay billaabatay xiisadda ka dhex oogan Qatar iyo xulufada Sacuudiga, waxa uu Qatar ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, hase yeeshee waxaa muuqata in isbeddel uu ku yimid mowqiikiisii hore.
“Xiriirka aan la leenahay Qatar waa sii wadi doonnaa. Marnabana lagama yaabo inaan halkaas ka rarno saldhigga milatari ee aan ku leenahay” ayuu yiri Trump, oo Qatar ku sheegay saaxiib wanaagsan oo Mareykanka uu leeyahay.
Saldhigga Al-Udeid ee Qatar ayaa waxaa Mareykanka ka jooga 10,000 oo askari.
Dhowaan ayaa wasiirada arrimaha dibedda Mareykanka iyo Qatar waxa ay Doha ku kala saxiixdeen heshiis dhigaya in lala dagaalamo maal-gelinta kooxaha argagixisada, waxaana Trump uu sheegay inay hadda muuqato in dadaallada Mareykanka ay miro-dhalayaan.
Dhinaca kale Trump ayaa sheegay inuu arbacadii qadka taleefonka kula hadlay boqorka Sacuudiga, si loo soo geba-gebeeyo xiisadda, islamarkaana loo qaado xayiraadaha saaran Qatar.
Si kastaba, Trump ayaa ah nin is-bedel badan, oo aan la isku haleyn karin hadalladiisa, waxaana mararka qaar muuqata inuusan xitaa ka war-hayn wixii uu shalay ku hadlay, ama uusan wax badan ka fahamsaneyn siyaasadda arrimaha dibedda.
Sarkaal kasoo goostay maleeshiyaadka al-Shabaab oo lasoo bandhigay
Xog & Xaqiiq:- Waa Maxay Shaqada Baarlamaanka FS? Miyeyse Gutaan Waajibaadkooda? (Akhriso)
Waa kuma Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (Ogaaw shaqsiyadiisa)
BREAKING: Major security shake-up after emergency cabinet meeting
Sahra Xanaan - February 19, 2018
The Somalia government has launched a major security shake-up on Monday after an emergency meeting held by cabinet ministers in Villa Somalia.Immediate changes were...
100 police reservists deployed in Wajir to boost security
Top UN humanitarian official in Somalia warns ‘we are not out of the woods yet’ on drought
KENYA: How police foiled a major terror plot
Turkey’s outreach hints at Ottoman revival
Four questions about the Ethiopian PM’s resignation – AFP
Come back, Mandera is now safe, say residents
Ethiopia’s EPRDF accepts Desalegn’s resignation, new PM in the offing